"Asaasaqa oo ku badan" dadka dagan agagaarka wadooyinka mashquulka badan - BBC Somali
"Asaasaqa oo ku badan" dadka dagan agagaarka wadooyinka mashquulka badan
Image caption Dadka dagan wadooyinka mashquulka badan oo halis ugu jira in ay asaasaqaan
Saynisyahanno reer Kanada ah ayaa ogaaday in dadka ku nool agagaarka wodooyinka mashquulka badan ay halis sii koraysa ugu jiraan in ay asaasaqaan ama dhibaato wayn soo gaarto habka ay maskaxdoodu u shaqayso.
Cilmi baaristan waxaa daabacday jariiradda arrimaha caafimaadka ee Lancet ee Britain ka soo baxda.
Saynisyahannadu waxay muddo toban sano ah baaritaan ku sameeyeen lix milyan oo ruux oo ku sugan gobolka Ontario.
Waxay ogaadeen in dadka dagan meel 50 mitir u jirta wadooyinka saxmadda badan in ay u badan tahay in ay boqolkiiba 12 uga dhawyihiin in uu ku dhaco cudurrada maskaxda khalkhaliya marka la barbardhigo dadka kale ee ka fog wadooyinkaas.
Waxay sheeheen in qiiqa wasakhaysan iyo sawaxanku in ay gacan ka gaysanayaan in maskaxdu diciifto.
Ku dhawaad 50 milyan oo ruux oo adduunka ku nool ayaa qaba noocyo ka mid ah xanuunka asaasaqa.